PressReader - Kwayedza: 2017-06-30 - Zvinoitwa nevatambi
15. NDEZVIPI zvinoitwa nevatambi vanotevera zvinoita kuti nyaya iri muna Dare Retariro ifambire mberi? (a) Muchaneta ( b) Moses (c) Sabhuku Sango (d) Mavis (e) VaSigauke. 
(a) Muchaneta aiva mwanasikana waVaMandionei
Anoenda kunomutsa amaiguru vake, Tandiwe usiku hwarwara VaMandionei. Izvi zvinoita kuti VaMandionei vazokasika kuendeswa kuchipatara sitiroko isati yavatadzisa kutaura. Anoudza mukoma wake, Moses kuti Zvidzai akanga amurova mbama mushure mekunge amubvunza kuti sei asundidzira Tandi achinodonhera pasi negotsi zvinoita kuti Zvidzai azorohwa chibhakera naMoses achibva apunzikira pasi ndokutanga kubuda ropa mukanwa nemumhuno.
( b) Moses aiva mwanakomana waVaMandionei
Anoita kuti Tandi aende kunonyoresa pamuviri kukiriniki yepaMutapi paanoti aperekedzwe ikoko nemudzimai wake, Hazvinei zvinoita kuti azovhenekwa chirwere cheshuramatongo namukoti Sibanda ndokuonekwa kuti ropa rake rakanga riine utachiona hweHIV. Anorova munin’ina wake Zvidzai nechibhakera akavarairwa ndokutanga kubuda ropa mukanwa nemumhuno zvinoita kuti azorohwawo mbama namai vake, VaMandionei vachiti aida kuvauraira mwana.
(c) Sabhuku Sango vaiva mutungamiri wenharaunda yaVaMandionei
Vanotsigira Tandi kuti agare pamusha paVaTigere zvinoita kuti azogara achishungurudzwa naVaMandionei kuburikidza nekutukwa kunzi ipfambi yaida kunenera mwanakomana wavo, Zvidzai mhosva yepamuviri pasiri pake, vachivavarira kuti adzokere kumusha kwavo kuChipinge. Vakatuma mupurisa wavo kuti audze vanhu venharaunda yavo kuti vaende kuchechi yeRoma musi weSvondo yaitevera zvinoita kuti horo yekuchechi yeHoly Name izare nevanhu uye vazodzidziswa nezvechirwere cheshuramatongo naTandi.
(d) Mavis aiva shamwari yaTandi yekuchikoro kuMutema High
Aidanana naNelson sekuru vaZvidzai zvakaita kuti Zvidzai azokwanisa kuona Tandi paakanga aperekedza Mavis kunoona Nelson. Anonyengedza Tandi kuti aite zvevakomana zvinoita kuti azopiwa pamuviri naZvidzai ndokubva asiira chikoro panzira achimutizira kumusha kwavo kwaZimunya.
(e) VaSigauke vaiva baba vaTandiwe Vanobuda muhoro yechikoro chepaMutema High pavanoona Tandi zvinoita kuti azokwanisa kusara achinyatsodzidzisa vanhu zvakanaka pamusoro pechirwere cheshuramatongo. Vanotambira Zvidzai paanosvika pamusha pavo achida kuroora Tandi. Izvi zvinoita kuti Zvidzai naTandi vazokwanisa kuchata vachibatanidzwa naMufundisi Madzore kuchechi yeRoma yaiva kwaZimunya.
16. Ndiani waungati ndiye mutambi mukuru muna Dare Retariro? Tsigira mhinduro yako nezvinhu zvaanoita munyaya iyi. 
Kwandiri mutambi mukuru ndiZvidzai anopa Tandiwe pamuviri. Izvi tinozvinzwa nezwi remunyori kuti Zvidzai akanga anyeperwa nen’anga inonzi Zinorengwe kuti akarara nemhandara utachiona hwaive muropa rake hweHIV hwaizopera. Paanozviita kuna Tandi musikana wake aive mhandara anobva amupa nhumbu zvikaita kuti azotizirwa akavarairwa.
Zvidzai anozadza Tandi utachiona hweHIV. Tinozviona paanorara naTandi achitevedzera zvaakanga audzwa naZinorengwe kuti akarara nemhandara utachiona hwaaive naho hweHIV hwaizopera. Izvi zvinoita kuti azopedzisira atapurirawo Tandi utachiona hweHIV.
Mutambi mukuru ndiZvidzai anoramba nhumbu yake. Zvinoonekwa zuva ratevera Tandi atizira Zvidzai panogarwa dare pamusha paVaTigere. Zvidzai anoramba pamberi pedare kuti akanga asina kupa Tandi pamuviri uye ainyeperwa zvinoitawo kuti amai vake, VaMandionei vamureverere.
Zvidzai anonyepera amai vake kuti pamuviri paTandi paisave pake. Izvi zvinobuda Muchaneta paanoperekedza Tandi natete vake Mai Mutema kuhozi kunorara. Zvidzai namai vake vanosara muimba yekubikira umo anovanyepera kuti akanga asina kupa Tandi pamuviri achiti aimupomera uye ipfambi. Ndizvo zvinoita kuti amai vake vamurwire kuti Tandi adzokere kumusha kwavo kuChipinge asi pachokwadi achiziva kuti nhumbu iyi yaive yake.
Mutambi mukuru ndiZvidzai anotiza pamusha. Tinozviona paanomuka achisiya katsamba pamusiwo wehozi yairara Tandi achimuoneka achiti ‘sara ugarike,’ achibva aenda kwaMutare kuDangamvura kunoita chihwindi kumakombi. Izvi zvinokonzera kuti Tandi achishungurudzwe zvakanyanyisa naVaMandionei achinzi chake hapasisina pamusha pavo.